प्रहरीले फेसबुकबाटै सोधपुछ ! सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्नु कानुन विपरित – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / प्रहरीले फेसबुकबाटै सोधपुछ ! सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्नु कानुन विपरित
ICT Khabar/आइसिटी खबर June 25, 2019	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, शिक्षा/चेतना Leaveacomment 124 Views
प्रहरीको काम सामाजिक सञ्जालका स्टाटसमाथि अनुसन्धान गर्ने मात्रै हुँदैन । कतिपय घटनामा सामान्य विषयमा अनावश्यक हात लागेको भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ । त्यसैले प्रहरीले सामान्य किसिमका घटनासँग जोडिएको विषयलाई सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जालबाटै सोधपुछ गर्न थालेको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त म्यासेजको स्क्रीनसट अनुसार पीडक व्यक्तिलाई ब्युरोको आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइलबाट सोधिएको छ, ‘तपाईं र अजिज रेनबीच पूर्व कुनै रिसिइबी थियो कि ? यसरी पोष्ट गर्नुको प्रमुख कारण के हो ? यस सम्बन्धमा, खुलाइ लेखी पठाउनु होला ।’
उनले प्रहरीलाई प्रश्नको जवाफ पनि दिएका छन् । डीआईजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्नु कानुन विपरित भएको बताउँदै सचेत रहन सर्वसाधारणलाई पनि आग्रह गरे ।
Previous फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी चल्यो ?
Next यूट्यूबमा भिडियो हेरेरै मासिक ४० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ !